Author: Mam Arak
Tuulam keessatti — Foollee jedhamu. Oromoonni karaa Qaalluu Waaqaan walqunnamuu malee, akkaataa biraas niqabu. Log In Sign Up. Inniniis waanuma hangafummaafi quxxusummaa hawaasa Oromoo keessa turerraa kifaaba nimala. Filmaata qondaaloota Gaddfi marii biyyaarratti argamuudhaan gargaaru.
Gadaa jaarsummaa ykn manguddummaati. Isaniis Raabamaafi Doorama tahu. Sirna Gadaa keessatti yeroo garagaraatti aadaan jireenya hafuura ilmaan Oromoo calaqqisan jiru.
Luwis jedutti isaan kanatti aanee kan godaane Oromoodha. Gaammoma waggaa 9- 16 3. Sadarkaalee Gadaafi Murnoota Gadaa a. Dargaggooma waggaa 24 4. Gaammoonni sadarkaa Gadaa yeroo itti ijoolleen jabbiilee tiksan, hojii warraarratti gargaaraniifi xeenaa tiksaniidha. Akkaataa dinagdeefi polotikaa issaarraa aadaan hawaasa Oromoo keessatti, bara Gadaa dagaagee beekamaa ture. Skip to main content. Marsaan Gadaa naannawutti walitti fidee ijoolleefi jaarsoolii hiriyyaa taasisaa.
Inniniis yeroo itti ilmaan kormaa Doorii jedhamaniidha. Kun hundi dinagdeefi polotikaa sirna hawaasaarratti hundeeyfamau; kanneenirraa calaqqisa argamaniidha.
Humni Oromoo jabaachuun warra wal lolaa turan gidduutti nagaya buuse. Aadaa kanaafi kana fakkaatan ala bahuun hawaasa keessaa nama baasa. Dhimma jireenya ummata Oromoo fuula hundaan kan ilaalu sirna siyaasa, aada diinagdeefi amantiiti. Help Center Find new research papers in: Jecha qofa osoo hintaane ummatni habashaas Itoophiyaa akka hintaaneefi alaa akka dhufan seenaan dhugaa baha.
Ilmi Marsaa tokko fixee, Gadaan isaa kan abbaa tahe, kan itti aanu kan ilmaan isaa taha jechuudha. Hojiin keenyas akka bofa garaa seeneeti. Maqaan sirna kanaas Gadaa jedhama. Gosoota Oromoo keessaa Booranni hangafa.
Namuu roorroo biyyarra geesse ittisuuf waan ittiin lolu- xiyyaas tahee, eeboofii gaachana mataa isaatii qopheeyfatee farda lolaas qabaate taha. Sadarkaa Gadaa kanatti ijoolleen hojii beekamaa kitsaba.
Hatahuu malee, geggeessaan Islaama Harar Amiir Nuur jedhamu humna walitti qabatee bara tti Habashatti duulee ture. Dalagaa kana fi kana fakkaataniin akka ummanni amantii Waaqatti amanuufi hordofu godhu; ummataafi Waaqa walqunnamsiisu.
Hamma Gadaan dagaagutti akkaataan bulmaata Oromoo sirna kanaan ture. Kanaaf Oromoon jaarraa 16ffaa keessa godaanuu jalqabee utuu hintaane, jaarraa hedduun dura suuta suutaan, ilmi quxxisuun dabree qubachaa, lafa margaafi bishaan qabu barbaadaa godaane.
Ilmi hangafni kabajamuu qaba. Eegaa xumuruudhaaf, geggeessaa amantii kan tahe Qaalluun jireenya hawaasa Oromoo sirna Gadaa keessatti qooda guddaa sadii qabaata. Sirna hawaasaa guutuu ture jechuudha. Kun jireenya hawaasa Oromoo bara sirna Gadaa keesaatti akkaataa Qabannoo aangoo polotikaa kan murteessuudha. Guutuu hawaasichaa keessatti yeroo itti aangoon polotikaa Gadaa tokkorraa kanitti dabru, ayyaana kanarratti horiin loon qalamanii, nyaachisni guddaan godhama.
Gadaan tokko waggaa saddeet qaba. Sadarkaalee Gadaa garagaraakeessatti ilmaan Oromoo dirqama dalagaa adda addaatu isa eeggata.
Carraan aangoo polotikaa keessaa qooda qabaachuufi dhiisuun isaa yeroo itti dhalaterratti hundeeyfama. Gujii keessatti — Raaba jedhama. Dhugaan kunimmoo abbaa biyyummaa Oromoo kan ibsudha. Goggeessi Gadaa shanan paartiilee shan kan ijoolleefii manguddoota hiriyyaa godhuus paartii tokkicha waliin qabaachuudha.
Manguddoota lammii keessaa ammoo, kan weenaa hangafaa hunda dursu. Yaa rabbii ilmaan Kitaava haqa garsiisi warra haqa isa ka dhabe karaa haqaatii fii gootummaan ifirratti falmatee deeffatu godhi!! Hariiroon ku yeroo dheeraaf hawaasa Oromoo keessatti hojjate. Gaafa Afaan Oromoo dubbachuufi ani Oromoodha jedhanii ofwaamuun mootummaa habashaa yeroo sanaatiin hin eeyyamamnetti, Ormoonni lagaafi gosaan garaa gara akka hinbaane gochuudhaan Oromummaan akka gadi dhaabbatu hiriyootasaa waliin nama dalagedha.
Harmuuf Gadaan isaa dhumee Robaleen harka fudhate. Kanaaf aangoo polotikaa keessaa qooda fudhachuu dandayu. Kanneen utuu kana godhanii, yeroo yerotti dhaqanii Qaalluu muudu. Hawaasa Oromoo bara sirna gadaa keessatti, kun murna lolu ture. Ituu keessatti — Doorii Raaba-dorii jedhamu.
Tuulama keessatti — Dabballee jedhamu. Hatahuu malee, Biifoleen akka Luboota isa duraa lafa haaraya qabachuudhaan hinmilkooyne. Osoo gaarri, hoqiifi hallayyaan hinjiru tahee, namni hafu hinjiru jedhaa ture barreeysaan Habashaa Alaqaa Atsimeen.
« HISTORIA DE LA FISICA DESIDERIO PAPP PDF	INTERMATIC ET1705C PDF »